warkii.com » Shatrughan Sinha(Can-jeex) oo taageeray Kangana Ranaut, isagoo bannaanka soo dhigay dadka iyada ka soo horjeeda hal arrin oo ay ka maseersan yihiin
Shatrughan Sinha(Can-jeex) oo taageeray Kangana Ranaut, isagoo bannaanka soo dhigay dadka iyada ka soo horjeeda hal arrin oo ay ka maseersan yihiin
Jilaaga caanka ah ee Shatrughan Sinha oo ay soomaalida u taqaano Can-jeex ayaa dhowaan dhaliil xooggan dusha kaga tuuray barnaamijka Koffee With Karan, isagoo ku tilmaamay inuu barnaamijkaas marwalba dhaliyo muran iyo hadal heyn ballaaran.
Rug caddaagan ayaa sidoo kale dalbaday waaxda dambi baarista dalka India ee CBI inay dib u billaabaan baarista kiiskii is-dilka ahaa ee Sushant Singh Rajput.
Intaas kaddib, Shatrughan ayaa ammaan badan ugu qubeeyay atariishada hadalka kulul ee Kangana Ranaut, waxaana dadka kasoo horjeeda uu ku tilmaamay inay ka maseersan yihiin guusheeda iyo geesinnimadeeda.
Can-jeex oo warreysi siinayay TV-ga Republic ayaa sheegay inay Kangana guul gaartay iyadoo aysan jirin cid garab qabatay, dadka arrimaheeda sida liddiga ah kaga hadlanaya ay yihiin kuwa maseersan heerka ay iyada is gaarsiisay.
“Dad aan arkay ee iyada ka soo horjeeda gudaha ayay ka maseersan yihiin. Annagoo aanan u naxariisan, annagoo aanan waxba u rajeyn, annagoo aanan ku darsan kooxaheenna, iyo annagoo aanan u duceyn ayay tallaabo dheer qaadday, waxayna gaartay guul weyn iyadoo aanan annaga riixin. waxay ku xun yihiin oo ay ka maseersan yihiin guusheeda iyo geesinnamadeeda” ayuu yiri Jilaaga siyaasiga ah ee Shatrughan Sinha.